Karazana: Ny kilasy fahadimy
Antoka misy fiantraikany amin'ny pharmacodynamic: Fanafody mitambatra
Fomba fitehirizana: Fisorohana ny zava-mahadomelina
Fonosana: Fonosana: 50ml, 100ml, 250ml / tavoahangy
Famokarana: 60000bottle / andro
Toerana niandohana: Hubei, Sina (Tanibe)
Fahaizana manome: 60000bottle / andro
Taratasy fanamarinana: GMP ISO
Vitamina B12 Tsindrona Butafosfan
Butafosfan B12 Injections manafaingana ny metabolisma ary manamafy ny hery fiarovana.
Vitaminina B12 Butafosfan tsindrona
fifehezan: isaky ny 100ml dia misy:Vitamina B12
Fitantanana sy ny doka:
Intravenous, tsindrona hozatra na hypodermic:
Soavaly, omby: 10-25ml isaky ny mandeha
Ondrilahy: 2.5-8ml isaky ny mandeha
Kisoa: 2.5-10ml isaky ny mandeha
Alika: 1-2,5ml isaky ny mandeha
Saka, Biby mitafy volom-borona: 0.5-5ml isaky ny mandeha.
antsasaky ny fatra ho an'ny biby tanora.
Fonosana:20ml, 50ml, 100ml / tavoahangy
1 Aretina metabolika mahery vaika: toy ny fahalotoan'ny biby vavy aorian'ny fiterahana sy ny aretina.
2 Ny aretina metabolika mitaiza: ny aretina alohan'ny biby tanora, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fitomboana voasakana;
3 Aretin'ny metabolika :: tsy fahampiana, fampihenana ny lactation, fihenjanana, fahatapahan-jaza.
4 Catalepsy vokatry ny tsy fahampian-dra, havizanana.
5 Manatsara ny fiarovana ny biby sy ny fitomboan'ny biby tanora.
6 Ampitomboy ny tanjaky ny hozatra sy ny vatana amin'ny hazakazaka, miasa na mametraka biby.
Butafosfan B12 Injectionis accelerator ho an'ny metabolisma sy ny intensifier ho an'ny tsimatimanota,
afaka manafaingana ny anabolisma ao anaty vatana, manatsara ny tsimatimanota; Ny vitamina B12 dia mety hisy fiantraikany amin'ny metabolisma ny proteinina, ny gliosida ary ny tavy. Manatsara ny fiforonan'ny erythrocyte koa izy io. Ireo roa ireo dia misy fiantraikany synergistic raha ampiasaina miaraka.
Ity vokatra ity dia natao ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo biby, fitantanana fiompiana tsy mety ary
aretinaniteraka fikorontanana metabolika, displasia an'ny biby tanora, fihenan'ny tsimatimanota sy ny fahaketrahana.Izy io dia mitondra antioxidant matanjaka, amin'ny fifantohana ambany, manakana ny fihenan'ny autoxyction ny tavy ary mampitombo ny anabolisma amin'ny faritra tsirairay amin'ny vatan'ny biby amin'ny alàlan'ny fomba fanentanana ara-batana tsotra, fanatsarana ny fiasan'ny aty, hozatra malefaka sy rafitra taolana, manampy ny rafi-pitatitra ho sitrana noho ny havizanana , mampihena ny fihenan'ny fihenjanana.
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy tsindrona Butafosfan B12 50ml tsara indrindra? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay mba hanampiana anao hamorona. Ny tsindrona Vitamin B12 100ml rehetra dia azo antoka ny kalitao. Izahay dia China Factory Factory an'ny Butafosfan 50ml tsindrona ary B12. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy vokatra: fanafody ara-tsakafo biby> Butafosfan + B12 tsindrona
Butafosfan sy ny tsindrona omby Vb12
Butafosfan Sy Vb12 Tsindrona